ပို့စ်တင်ချိန် - 5/19/2014 01:19:00 PM
လျှပ်စစ်မီတာခ တိုးမြှင့်ခြင်းအတွက် မကျေနပ်သည့်ပြည်သူများ ရန်ကုန်မြို့၌ မတ်လကုန်ပိုင်းအတွင်းက ဆန္ဒပြကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ-မင်းသိန်းနိုင်)
အစိုးရသစ် တက်လာပြီးနောက် အစစအရာရာ မြင့်တက်လာသည့် ကုန်ဈေးနှုန်းများ စားဝတ်နေရေး ပြဿနာများအပေါ် ယခုနှစ် ဧပြီလကုန်မှ စတင်တိုးမြှင့်လိုက်သော မီတာခ၏ ထပ်ဆင့်ထိုးနှက်မှုကြောင့် မပြေလည်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ပြည်သူများအကြား မကျေလည်မှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်နေပြီဖြစ်သည်။
“လုပ်ငန်းငယ်တွေအတွက် မြင့်တက်လာတဲ့ လျှပ်စစ်မီတာခက ထိခိုက်မှု ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် လျှပ်စစ်မီးမှန်ရင် တော်သေးတယ်။ အခုက မီးပြတ်လို့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ရပ်ထားရတဲ့ ရက်တွေက ဒီဧပြီလမှာ ခြောက်ရက်ခုနစ်ရက်လောက် ရှိတယ်။ လုပ်ငန်းရပ်ထားလို့ ကုန်ကြမ်းကနေ ကုန်ချောလုပ်တဲ့အဆင့်ကို မလုပ်နိုင်လို့ ၀င်ငွေလျော့ကျချိန်မှာ မီတာခက အရင်ကျပ် ၂၀၀၀၀ ကျော်ကနေ ကျပ် ၃၀၀၀၀ ကျော် ဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းငယ်တွေ ကြီးထွားလာအောင် မြှင့်တင်မှုအစား မပြိုပြိုအောင် ဖြိုနေသလိုပဲ” ဟု အသေးစား ကော်ရည်ကျိုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ ဦးဇော်ဇော်က ဆိုသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်မှစ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲခများကို တိုးမြှင့်ကောက်ခံရန် အစိုးရ၏ တင်ပြမှုကို မတ် ၁၉ ရက်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ အစိုးရက လက်ရှိကောက်ခံနေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများဖြစ်သော အိမ်သုံးတစ်ယူနစ်လျှင် ၃၅ ကျပ်၊ စက်မှုသုံး တစ်ယူနစ်လျှင် ၇၅ ကျပ်၊ အစိုးရသုံး တစ်ယူနစ်လျှင် ၃၅ ကျပ် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် တစ်ယူနစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀ ဒသမ ၁၂ ဖြင့် ကောက်ခံနေမှုအား ဧပြီ ၁ ရက်မှစ၍ သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းထားများအတိုင်း ကောက်ခံရန် အတည်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“မီးတာခတက်တာ သာမန်အိမ်ထောင်စုတွေကိုတောင် အများကြီး ထိခိုက်တာ အန်တီတို့လို လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင် ပိုဆိုးတာပေါ့။ ယူနစ်တွေ အများကြီး ရှုံးတဲ့အခါ မီတာခတွေက အဆမတန် တက်နေတော့ direction cost ကို ပြန်တွက်ရတယ်။ ရေထွက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုန်ကြမ်းကလည်း လျော့နေတော့ မီတာက ဒီလိုနှုန်းနဲ့ဆိုရင် မကိုက်တော့ဘူး။ ကုန်ကြမ်းရှားနေတဲ့ ရေထွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စက်ရုံတွေမှာ အအေးခန်းလို နေရာမှာသုံးတဲ့ မီတာခတွေက နှစ်ဆပိုများလာတယ်။ ပြည်ပကို Export ပို့တာတွေလည်း လျော့လာမယ်” ဟု ရေထွက်ပစ္စည်းနှင့် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပြည်သူများ ကန့်ကွက်နေသည့်ကြားမှ တိုးမြှင့်လိုက်သော မီတာခနှုန်းထားများ စတင်ကောက်ခံလာမှုကြောင့် အသေးစားအလတ်စား လုပ်ငန်းငယ်များနှင့် ပြည်သူများအကြား မီတာခကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်လာသဖြင့် အခက်ကြုံနေရကြောင်း သိရသည်။
“အရင်လတွေကဆိုရင် မီတာခက ကျပ် ၁၃၀၀၀ ၀န်းကျင်လောက်ပဲ ကျတာ။ အခုလမှာတော့ မီတာခက ကျပ် ၂၀၀၀၀ ကျော်သွားပြီ။ ကျွန်တော်က ပင်စင်စားဖြစ်တဲ့အတွက် ပင်စင်လစာက ကျပ် ၆၀၀၀၀ ကျော်လောက်ပဲ ရတယ်။ အဲဒီလစာလေးနဲ့ မီတာခကိုပဲ တိုးပြီးပေးရတာက တစ်မျိုး၊ ပြီးတော့ ရေခွန်၊ အိမ်လခတို့သာ ထပ်ပြီးပေးရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မိသားစုဘ၀ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်” ဟု သုဝဏ္ဏ ၂၉ ရပ်ကွက်၊ ကောက်လျင်လမ်းတွင် ဇနီး၊ မြေးသုံးယောက်နှင့်အတူ နေထိုင်သည့် အလုပ်သမားအရာရှိ အငြိမ်းစားဖြစ်သူ ဦးတင်အောင်က မေ ၁၈ ရက်တွင် ဆိုသည်။
အစိုးရ၀န်ထမ်းများ လစာအား ကျပ် ၂၀၀၀၀ အထိ ထပ်မံတိုးမြှင့်ခြင်းကြောင့် ချိန်ခါမီ မြင့်တက်လာသည့် ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုအား ပြည်သူများ ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင် ယခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် မီတာခထက် ဧပြီလတွင် ပေးဆောင်ရသည့် မီတာခမှာ နှစ်ဆခန့် မြင့်တက်လာမှုကြောင့် အသေးစားအလတ်စား လုပ်ငန်းငယ်များနှင့် သာမန်ပြည်သူများအကြား အခက်အခဲများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာနေကြောင်း သိရသည်။
“မတ်လကုန်တုန်းက ကျပ် ၄၀၀၀ ကျော်လောက်ပဲကုန်တဲ့ မီတာခက အခုမီတာခတွေ စပြီးတိုးကောက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျပ် ၈၀၀၀ ကျော်လောက် ဖြစ်လာလို့ အမေက ညဘက်မှာ မီးဖွင့်မအိပ်နဲ့တော့တဲ့” ဟု ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်နေ မမြင့်မြင့်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ကျွန်မတို့အိမ် တစ်လ၀င်ငွေကတော့ ပုံမှန်ပဲ ဖြစ်နေပေမယ့် ကုန်ကျစရိတ်တွေဖြစ်တဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းတို့၊ မီတာခတို့ကတော့ တဖြည်းဖြည်း တိုးလာတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီလဆိုရင် မီတာက ထက်ဝက်ကျော်တက်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခုတစ်လော ကျွန်မတို့ အိမ်ရှင်မတွေ ပြောနေကြတာက ၀င်ငွေပိုရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ရှာချင်ရှာ မဟုတ်ရင်တော့ လျှပ်စစ်ကို ချွေတာသုံး ဆိုတာပဲ” ဟု ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ အိုးဘိုလမ်းနေ ဒေါ်အေးမူကဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့သည် စားဝတ်နေရေးပြဿနာ တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် ပိုမိုကြီးမားလာသောမြို့ဖြစ်လာပြီး တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ နိမ့်ကျမှု၊ လျှပ်စစ်မီတာခ မြင့်တက်လာမှု၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ် ကြီးမြင့်မှုနှင့် ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတို့သည် မြို့နေလူထုအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် ပိုမို၍ ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းနှင့် လူထု၏ စားဝတ်နေရေး မချောင်လည်မှုမှတစ်ဆင့် စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းများသည် နေ့စဉ် လူနေမှုဘ၀ကို ရိုက်ခတ်နိုင်သော ကြီးမားသည့် ပြဿနာများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မှုများလည်း ရှိနေသည်။
အရင်လတွေကဆိုရင် မီတာခက ကျပ် ၁၃၀၀၀ ၀န်းကျင်လောက်ပဲ ကျတာ။ အခုလမှာတော့ မီတာခက ကျပ် ၂၀၀၀၀ ကျော်သွားပြီ။ ကျွန်တော်က ပင်စင်စားဖြစ်တဲ့အတွက် ပင်စင်လစာက ကျပ် ၆၀၀၀၀ ကျော်လောက်ပဲ ရတယ်။ အဲဒီလစာလေးနဲ့ မီတာခကိုပဲ တိုးပြီးပေးရတာက တစ်မျိုး၊ ပြီးတော့ ရေခွန်၊ အိမ်လခတို့သာ ထပ်ပြီးပေးရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မိသားစုဘ၀ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ် . . . . .
“မီတာခတွေ တက်တော့မယ် ဆိုကတည်းက မလိုအပ်တဲ့မီးတွေ အကုန်ပိတ်တယ်။ ညဆိုလည်း လိုအပ်တဲ့နေရာပဲ မီးဖွင့်တယ်။ ဒီလိုလုပ်ထားတာတောင်မှ အရင် ကျပ် ၂၀၀၀ ကျော်လောက်ပဲကျတဲ့ မီတာခက အခုလ ကျပ် ၃၀၀၀ ကျော် ၄၀၀၀ နီးနီးလောက် ကျတယ်။ နောက်လလည်း ဒီလိုချွေတာရမှာပါပဲ” ဟု ပခုက္ကူမြို့နေ ဦးဝင်းဌေးက ဆိုသည်။
“အရင်လတုန်းက မီတာခက ကျပ်ငါးသောင်းခွဲလောက် ကျတယ်။ အခု ဒီလကစပြီး မီတာခတွေ စတက်တော့ ခုနစ်သောင်းခွဲလောက် ကျတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်တော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဒီကြားထဲ လျှပ်စစ်မီးက ခဏခဏ ပျက်သေးတယ်။ မီးစက်နဲ့ဆိုရင် ဆီးဖိုးနဲ့က မကိုက်ဘူး။ နောက်ပြီး အိမ်လခတွေ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းတက်တော့ ရမယ့်ပိုက်ဆံတောင် မကျန်တော့ဘူး။ ကြာရင်လူတွေလည်း မြို့ပြင်ရောက်တော့မယ်။ အဘက်ဘက်က စုမိဆောင်းမိဖို့ မပြောနဲ့ ဒီနေရာမှာ ဆက်နေဖို့တောင် အနိုင်နိုင် ရှာနေရတာပါ” ဟု ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် ဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်နေသူ ဦးကျော်က ပြောကြားသည်။
လတ်တလောအချိန်တွင် ဆန်ဈေးနှင့်ဆီဈေးများ မတက်သေးသော်လည်း အခြားကုန်စည်ဈေးနှုန်းများ အထိုက်အလျောက် တက်လာသည့်အတွက် လည်းကောင်း၊ ယေဘုယျအားဖြင့် လူတို့တွင် inflation psychology ရှိနေသည့်အတွက် လည်းကောင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်းသည် ကျဆင်းမှုမရှိတော့ဘဲ အတက်ဘက်သို့သာ ဦးတည်နေကြောင်း၊ နေထိုင်မှုစရိတ် မြင့်တက်မှုအပြင် စားသောက်ရေးပါ ခက်ခဲလာသည့်ဒဏ်ကို ယနေ့လူထုက ခံစားနေရကြောင်း သိရသည်။
“အထူးသဖြင့် ဒီရက်ပိုင်း ဈေးထဲမှာ၊ လမ်းထဲမှာ ကြားနေရတာက ဒီမီတာခကိစ္စပဲ။ ကျွန်မတို့အိမ်မှာဆိုလည်း မီတာခက အရင်လတွေနဲ့စာရင် ငါးထောင်လောက် တက်တယ်။ အစက သား၊ ငါးတွေက ဈေးတက်တာတွေ၊ ဟိုဟာဈေးတက်တာ၊ ဒီဟာဈေးတက်တာတွေ ရှိလာတာလောက်က မသိသာပေမယ့် မီတာခ များလာတာတွေပါ ပေါင်းလိုက်ရင် အသုံးစရိတ်တွေ ပိုကုန်လာတယ်။ ဒီတော့ တစ်လတစ်လ ကုန်ကျစရိတ်တွေက များလာတာတွေရှိတော့ စကားကြီး စကားကျယ် ပြောတယ်လို့ပဲထင်ထင် ကျွန်မတို့ရတဲ့ ၀င်ငွေနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က မညီမျှဘူးဆိုတာတွေက သိသာလာပါတယ်” ဟု လှိုင်မြို့နယ် သံလမ်းတွင်နေထိုင်သူ ဒေါ်ခင်ရီက ပြောပြသည်။
အလားတူ ပြည်တွင်း၌ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိရန်၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သည်ဟု သုံးသပ်ဆွေးနွေးမှုများ ရှိနေသော်လည်း နေရာရရှိရန် အခက်အခဲ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲနှင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရန် အခက်အခဲတို့ကြောင့် ပြည်တွင်းအသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့မှာလည်း အတားအဆီးများစွာ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို အခွန်နဲ့ တည်ထောင်မယ်ဆိုပြီး ပြည်သူတွေဆီက အခွန်တွေကို တိုးမြှင့်ကောက်ခံတယ်။ ကောက်ခံပြီးရင် တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးပြုလဲဆိုတာ ခေတ်စနစ်အညီ ပြည်သူတွေ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် ချပြတာမျိုးမရှိဘူး။ အခု ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒမပါဘဲ လျှပ်စစ်မီတာခကို တိုးမြှင့်ကောက်ခံတယ်။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေက ကြိုက်သလောက်သုံး ကျသလောက်ပေးနိုင်ပေမယ့် တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရတဲ့ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေအတွက် အခက်အခဲ အများရှိလာတယ် . . . . .
“အစိုးရက လစာတိုးပေးတော့ ငွေလေးနှစ်သောင်းထဲ။ လကုန်ပြန်ထွက်မယ့်ငွေက ဒီထက်မက ပိုကုန်မယ်။ မီတာခက အရင်တုန်းက သုံးထောင်ကနေ လေးထောင်ကြားပဲကျတာ။ ခုတော့ ခုနစ်ထောင်ကျော်တောင် ကျတယ်။ ဒါတောင် အရင်လို လျှပ်စစ်မီးနဲ့ ထမင်းဟင်းမချက်တော့ဘူး။ မီတာခကိုသာ တိုးကောက်နေတယ် မီးကျတော့ ပျက်လိုက်လာလိုက်နဲ့။ ပုံမှန်လည်းမရှိဘူး။ နွေဆိုရင်လည်း နွေမို့လို့ မိုးတွင်းဆိုလည်း လေလေးနည်းနည်း မတိုက်နဲ့ ကျိန်းသေတယ် မီးပျက်ဖို့။ ပေးရတဲ့ငွေက များနေပြီး သုံးစွဲရတဲ့ လျှပ်စစ်ကတော့ သွင်းရတဲ့ငွေ မညီမျှပါဘူး။ ရှေးရေး နောင်ရေးအတွက် စုဖို့ဆောင်းဖို့နေသာ လကုန်တိုင်းထွက်မယ့် ထွက်ငွေတွေကို တွက်ရင်း ရင်မောရတာနဲ့ပဲ အသက်လည်းတိုမှာပါပဲဗျာ” ဟု သာကေတမြို့နယ်နေ ကိုကိုလင်းထွန်းက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ဧပြီလမှစတင်ပြီး မီတာခများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမှုများ ပြုလုပ်ရာ၌လည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ အချို့သော မြို့နယ်များအတွင်း အိမ်သုံးမီတာခများ တွက်ချက်ရာ၌ ယခင်က မီတာနှစ်လုံးခွဲကာ ပေးဆောင်နေရာမှ ယခုဧပြီလအတွင်း ကောက်ခံရာ၌ မီတာနှစ်လုံးအတွက် ဘီလ်တစ်စောင်တည်းဖြင့် တစ်ပေါင်းတည်း ကောက်ခံသည့် ကိစ္စများလည်း ကြုံတွေ့လာရကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံ ပြည်သူများထံမှ သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့အိမ်က လုပ်ငန်းမရှိတဲ့ အိမ်သုံးသက်သက်ကိုမှ lighting အတွက် မီတာတစ်လုံး၊ power အတွက် မီတာတစ်လုံး သုံးပါတယ်။ ဒါက အစကတည်းက သုံးတာပါ။ မီတာခဘီလ်ဆောင်ရင်လည်း မီတာနှစ်လုံးက ဘီလ်နှစ်စောင်နဲ့ မီတာခဆောင်ပါတယ်။ အခုဧပြီလကစပြီး မီတာခတွေ တိုးကောက်တယ်လေ။ ဧပြီလအတွက်ကျတော့ မီတာနှစ်လုံးက ဘီလ်ကို တစ်လုံးစာတည်းပေါင်းပြီး ဆောင်ခိုင်းတယ်။ ဧပြီလထဲမှာ ကျွန်တော်တို့က ၁၀ ရက်တော့ ခရီးသွားထားတော့ မီတာနှစ်လုံးက ၉၇ ယူနစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ နောက်လတွေဆိုရင် ဒီလိုမီတာနှစ်လုံးကို တစ်စောင်တည်း ပေါင်းဖြတ်တော့ ယူနစ်က ၁၀၀ ကျော်သွားပြီ။ ၁၀၀ ကျော်ရင် ဈေးကတစ်မျိုး ဖြစ်သွားတော့မယ်။ ကျွန်တော် စုံစမ်းကြည့်သလောက် တော်တော်များများ အဲလိုဖြစ်နေကြတယ်” ဟု လသာမြို့နယ်မှ ဦးအောင်လှိုင်က ပြောကြားသည်။
“ဧပြီလကုန်ကတည်းက လစာက တိုးသွားတာဆိုတော့ ခုချိန်မှာ ကုန်ဈေးနှုန်း တဖြည်းဖြည်း တက်လာတာကိုတော့ တွေ့လာရတယ်။ လစာတိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက် ၀ယ်လိုအား ပိုကောင်းလာမယ်။ ပိုကောင်းလာတဲ့အတွက် ကုန်ဈေးနှုန်းကလည်း ဈေးတက်လာမယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှာ မီတာခကြီးမြင့်မှုကြောင့် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ကုန်ကျစရိတ် ပိုမြင့်သွားမလဲ ဆိုတာကိုတော့ တွက်ကြည့်ရဦးမှာပါ။ မီးမရတဲ့ ပြဿနာလည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ ကုန်ကျစရိတ် ဘယ်လောက်မြင့်တက်သွားလဲ ဆိုတာထက် ရရှိတဲ့ယူနစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် နှိုင်းယှဉ်ရင် အဖြေထွက်လာမှာပါ” ဟု မြန်မာ့စီးပွားရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးမြင့်သောင်းက ပြောကြားသည်။
ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာမှု၊ လျှပ်စစ်မီတာခများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံလျက် ရှိသော်လည်း မီးအပြည့်အ၀ မရရှိသေးသည့် ပြဿနာများ စသည်တို့ဖြင့် ပြည်သူများအကြား စားဝတ်နေရေးနှင့် အထွေထွေ လူမှုဒုက္ခများကြောင့် ပြည်သူလူထု၏ နေ့စဉ်ဘ၀တို့ ရပ်တည်ရှင်သန်ရန် ပိုမိုခက်ခဲလာကြောင်းလည်း သိရသည်။
“SMEs တွေအတွက်ကတော့ အခုလို မီတာခ တိုးကောက်တဲ့အတွက် ထိတော့ထိမှာပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ မထူးတော့ဘူးလို့ ခံစားရတယ်။ ပိုက်ဆံလည်း ချေးလို့မရဘူး။ နေရာဆိုတာကလည်း တကယ့်စက်မှုဇုန်လို နေရာမျိုးမှာ ရတာမဟုတ်ဘဲ အိမ်ကြိုအိမ်ကြားမှာ လုပ်နေရတဲ့ အနေအထားမျိုးမှာဆိုတော့ တိုးပြီးတော့ ထူးမလာတော့ပါဘူးလို့ပဲ သဘောထားလိုက်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာက ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်တာထက် တရုတ်ကပစ္စည်းတွေ ပြည်တွင်းကို အောက်လမ်းက၀င်လာပြီး ပြည်တွင်းမှာ တံဆိပ်ကပ်ပြီးတော့ မြန်မာ့ထွက်ကုန်ဆိုပြီးတော့ပဲ ဖြစ်သွားမှာပါ။ အဲဒီ အနေအထားတွေလည်း တွေ့နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မီတာခဈေးတက်သလို မှန်မှန်လည်း မီးကမရပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို SMEs တိုးတက်ရေးဆိုတာ အပြောမှာပဲရှိပြီး လက်တွေ့မှာ မဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် ရေရှည်မှာ SMEs တွေရဲ့ ရပ်တည်ရေးကလည်း အများကြီး အခက်အခဲရှိလာမှာပါ” ဟု ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးမြင့်ဇော်က ပြောကြားသည်။
“အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို အခွန်နဲ့ တည်ထောင်မယ်ဆိုပြီး ပြည်သူတွေဆီက အခွန်တွေကို တိုးမြှင့်ကောက်ခံတယ်။ ကောက်ခံပြီးရင် တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးပြုလဲဆိုတာ ခေတ်စနစ်အညီ ပြည်သူတွေ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် ချပြတာမျိုးမရှိဘူး။ အခု ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒမပါဘဲ လျှပ်စစ်မီတာခကို တိုးမြှင့်ကောက်ခံတယ်။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေက ကြိုက်သလောက်သုံး ကျသလောက်ပေးနိုင်ပေမယ့် တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရတဲ့ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေအတွက် အခက်အခဲ အများရှိလာတယ်။ သက်သောင့်သက်သာနေနိုင်တဲ့ လူနေထိုင်မှုပုံစံကို ရနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဆိုလိုတာက ပူလို့ ပန်ကာတစ်ခုတောင် မဖွင့်နိုင်ဘဲ ညဘက်မီးလုံး တစ်လုံးတည်းနဲ့ နေထိုင်နေရတဲ့ လူတန်းစားတွေ အများကြီးပါ။ အစိုးရအနေနဲ့ လျှပ်စစ်မီတာ တိုးကောက်ခဲ့တာက အခြေခံလူတန်းစားတွေ အတွက်တော့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ အစိုးရမီတာခတက်ရင် သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို အနည်းနဲ့အများ ဈေးတက်ကြမှာပဲ။ အဲ့ဒီတော့ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်သုံးတဲ့ ပြည်သူတွေထဲမှာမှ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေအတွက် စားသောက်ရေး အခက်အခဲ ဖြစ်လာပြန်ရော။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးခံရတာက အခြေခံလူတန်းစားတွေပါပဲ။ ကျွန်တော်အိမ်မှာ အရင်က ပန်ကာသုံး၊ ရေခဲသေတ္တာသုံး၊ မီးပူတိုက်တာမှ တစ်လလေးထောင်ကျော်ပဲ ကျတယ်။ ဒီလ ရှစ်ထောင်လောက်ကျတယ်။ ခေတ်တွေပြောင်းလို့ ပြည်သူတွေ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ စားဝတ်နေရေးတွေ၊ အထူးသဖြင့် အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ ဘ၀က ဘာတစ်ခုမှ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာ မရှိပါဘူး” လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှ ကျူရှင်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမျိုးကိုက ပြောကြားသည်။
“မီတာခက တက်သွားတာကလည်း အဆမတန်ဘဲ။ အရင်တုန်းကလည်း ဒီလောက်ပဲသုံးတာ။ ရှေ့လက သုံးထားတဲ့ယူနစ်နဲ့ ခုလဆောင်ရမယ့် ယူနစ်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်တော့ လေးယူနစ်ပဲ ကွာတယ်။ ငွေက နှစ်ထောင်ကျော် ပိုသွားတယ်။ မီးကျတော့ ပုံမှန်မလာဘူး။ အန်တီတို့မှာ မီးလာပြီဆိုတာနဲ့ သုံးဖို့ရေကို အမြန်မောင်းရတယ်။ မီးအားက တစ်ခါတလေ ကျသေးတယ်။ အန်တီတို့မှာ ၀င်ငွေနဲ့ထွက်ငွေ ညီမျှအောင် ငွေကို မနည်းချွေတာ သုံးစွဲနေရတယ်။ ဆောင်ရမယ့် မီတာခွန်ကို ယုံတောင်မယုံကြည်နိုင်ဘူး။ တိုးကောက်လို့ ပိုကုန်မယ်သိပေမယ့် ဒီလောက်ကြီး များသွားမယ်လို့ မထင်ဘူး” ဟု ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်နေ ဒေါ်တင်တင်ဌေးက ပြောကြားသည်။